माधव नेपाल समुहमा नयाँ लफडा ! ‘देउवाको एमाले फुटाउने नियत देखियो’ भन्दै केहीले गरे विरोध, को को हुन् विश्वासको मत नदिने नेता ? – Classic Khabar
प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवाले नेकपा एमाले फुटाउने नियतले यति छिटै विश्वासको मत लिन लागेको भन्दै नेकपा एमालेको माधव नेपाल समूहमा विवाद देखिएको छ । आइतवार विश्वासको मत लिने देउवाको घोषणासंगै कोटेश्वरमा नेपाल पक्षका सांसदहरुको बैठक बसेको छ । बैठकमा विश्वासको मत दिने र नदिनेबारे छलफल भएको छ ।
Prevऋषि धमलालाइ गायिका मधु छेत्रीले यस्तो भनेपछि अर्की गायिका टिका सानु लजाइन
Nextमाइजु र भान्जालाई राती ११ बजे ओछ्यान मै गाउँलेले फेला पारेपछी ….